Ch 5 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 5 Matthew
5:1 Avy eo, nony nahita ny vahoaka, dia niakatra ny tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka, ny mpianany nanatona Azy,
5:2 ary manokatra ny vavany, nampianatra azy, nanao hoe::
5:3 "Sambatra ny malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra.
5:4 Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no handova ny tany.
5:5 Sambatra ny ory, fa izy no ho nampionona.
5:6 Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa izy no ho afa-po.
5:7 Sambatra ny miantra, fa izy no hahazo famindram-po.
5:8 Sambatra ny madio am-po, fa izy no hahita an'Andriamanitra.
5:9 Sambatra ny mpampihavana, fa izy no hatao hoe zanak'Andriamanitra.
5:10 Sambatra izay miaritra fanenjehana noho ny rariny, fa azy ny fanjakan'ny lanitra.
5:11 Sambatra ianareo raha efa manendrikendrika anao, ary nanenjika anao, ary nilaza isan-karazany izay teny ratsy ianao, lainga, noho ny amiko:
5:12 ho faly sy ho ravoravo, fa ny valim-pitianareo any an-danitra dia mahavokatra. Fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo.
5:13 Ianareo no fanasin'ny tany. Fa raha ny sira very ny saltiness, amin'ny ahoana izany ny sira? Tsy ilaina intsony mihitsy, afa-tsy ny hariana any ivelany ka nohosihoseny olona.
5:14 Hianareo no fahazavan'izao tontolo izao. A tanàna miorina eo an-tendrombohitra Tsy azo afenina.
5:15 Ary izy ireo no tsy mampirehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa eo amin'ny fitoeran-jiro, ka mba hamirapiratra amin'izay rehetra ao an-trano.
5:16 Koa dia, Aoka Hamirapiratra ny Fahazavanareo eo imason'ny olona, ka mba hahitany ny asa soa ataonareo, ary mba hanomezany voninahitra ny Rainareo, Izay any an-danitra.
5:17 Aza ataonareo fa tonga Aho hamaha ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga mba hamaha, fa hanatanteraka.
5:18 Amen Lazaiko aminareo, Azo antoka fa, mandra-lanitra sy ny tany ho levona, tsy misy iota, teboka iray tsy ho levona amin'ny lalàna, mandra-pahatongan'izany rehetra atao.
5:19 Noho izany, na iza na iza no efa hiavian'ny iray amin'ireo didy kely indrindra ireo, ary nampianatra ny olona toy izany, dia hatao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa na iza na iza no nanao sy nampianatra ireo, izany olona izany dia hatao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra.
5:20 Fa lazaiko aminareo, fa raha tsy ny rariny efa nihoatra noho ny an'ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra.
5:21 Efa renareo fa voalaza tamin'ny ntaolo: 'Aza mamono olona; na iza na iza no efa namono dia ho mendrika ny fitsarana. '
5:22 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, fa na iza na iza lasa tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika ny fitsarana. Fa na iza na iza no efa niantso ny rahalahiny, 'adala,'Dia mendrika ho any amin'ny filan-kevitra. Avy eo, na iza na iza no efa niantsoako azy, 'Misy Ilana Azy,'Dia mendrika ho any amin'ny afon'ny helo.
5:23 Noho izany, Raha manolotra ny fanatitrao ho eo amin'ny alitara, ary any no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao,
5:24 dia avelao eo, eo anoloan'ny alitara, ka mandehana aloha mihavana amin'ny rahalahinao, ary avy eo mba hanatona hanolotra ny fanatitrao.
5:25 Mihavana amin'ny manana ady faingana, fa aoka ianareo mbola eny an-dalana aminy, fandrao angamba ny fahavalo mba hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara hanolotra anao mety amin'ny mpamatotra, ary ianao dia hatsipy any am-ponja.
5:26 Amen Lazaiko aminareo, fa dia tsy mivoaka avy any, mandra-hovaliana ny farany lafiny.
5:27 Efa renareo fa voalaza tamin'ny ntaolo: 'Aza manitsakitsa-bady.'
5:28 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, fa na iza na iza no efa nijery ny vehivavy, ka ka mitsiriritra azy, dia efa nijangajanga taminy tao am-pony.
5:29 Ary raha ny masonao ankavanana no manafintohina anao hanota, hamongotra hiala izy, ka ario ho afaka aminao. Fa tsara ho anao ny iray amin'ny mpikambana very, toy izay ny tenanao rehetra no hariana any amin'ny helo.
5:30 Ary raha ny tananao ankavanana no manafintohina anao amin'ny ota, dia tapaho ka ario lavitra anao. Fa tsara ho anao ny iray amin'ny mpikambana very, toy izay ny vatanao manontolo any amin'ny helo.
5:31 Ary voalaza hoe:: 'Na zovy na zovy no handroaka ny vadiny, dia aoka izy hanome an-dravehivavy taratasy fisaoram-bady. '
5:32 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, fa na iza na iza no efa voaroaka ny vadiny, afa-tsy ny zava-fijangajangana, mahatonga azy hijangajanga; ary na iza na iza no efa nanambady azy izay efa voaroaka dia mijangajanga.
5:33 Indray, efa renareo fa voalaza tamin'ny ntaolo: Aza mianian-tsy tò. Fa ianao no hamaly ny nianiana ho an'i Jehovah. '
5:34 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, aza mianiana mihitsy fianianana, na amin'ny lanitra, fa ny seza fiandrianan'Andriamanitra,
5:35 na ny eto an-tany, fa fitoeran-tongony, na amin'i Jerosalema, fa ny tanànan'ny mpanjaka lehibe.
5:36 Ary aza mianiana fianianana amin'ny lohanao ihany, satria tsy afaka mahatonga singam-bolo iray ho lasa fotsy na mainty.
5:37 Fa aoka ny teninareo rehefa Eny dia 'Eny,'Sy ny' Tsia 'midika hoe' Tsia 'Fa na inona na inona mihoatra noho izany ny ratsy.
5:38 Efa renareo fa voalaza hoe: 'Maso solon'ny maso, ary ny nify solon'ny nify. '
5:39 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, tsy manohitra izay ratsy, Fa raha misy kosa efa namely anao amin'ny ankavanana takolany, tolotra ho azy koa ny anankiray.
5:40 Ary na iza na iza maniry ny hifandahatra aminao amin'ny fitsarana, izy mba hanesorany ny akanjonao, halefako ho azy koa ny lambanao.
5:41 Ary na iza na iza no no nahatery anareo ho arivo dingana iray, dia mandehana miaraka aminy roa arivo dingana.
5:42 Na iza na iza mangataka aminareo, omeo azy. Ary raha misy te hisambotra aminao, aza miala aminy.
5:43 Efa renareo fa voalaza hoe, 'Tiava ny namanao, dia hanana fankahalana ny fahavalonao. '
5:44 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo. Manaova soa amin'izay mankahala anareo. Ary mivavaha ho an'izay manenjika sy manendrikendrika anareo.
5:45 Amin'izao fomba izao, dia ho tonga zanaky ny Rainareo, Izay any an-danitra. Mampaniry ny masoandro mba hitsangana eo amin'ny tsara sy ny ratsy, ary mahatonga azy ranonorana tambonin'ny amin'ny marina sy ny tsy marina.
5:46 Fa raha izay tia anareo, inona no valisoa ho anao? Moa na dia ny mpamory hetra aza mitondra tena izany?
5:47 Ary raha ny rahalahinareo ihany no miarahaba, inona koa moa no nataonao? Moa na dia ny mpanompo sampy mitondra tena izany?
5:48 Noho izany, ho tanteraka, ho tahaka ny any an-danitra izay lavorary. "